ne admin pane 20-12-05
The 30th International Exhibition pamusoro Electir Power Equipment uye Technology We Fayun Electric Company pakupedzisira akasangana nevamwe navo indasitiri muna 2020 Shanghai International Electric Power uye Electrician Exhibition.On zuva rokutanga pashoo, boka redu dumba vakagamuchira zvakawanda th ...
FAYUN Electirc Co, Ltd. yakabatana neElectrrama-2020 kuDelhi
FAYUN Electirc Co, Ltd. yakabatana neElectrrama-2020 kuDelhi. Fayun Electric Co, Ltd. ine 20years yakakwira magetsi zvinhu ruzivo. Fayun MOV Blocks / ZnO Varistors vanozivikanwa kwazvo muIndia Market. Kupfuura makore anopfuura gumi echiitiko mukuvandudza iyo Indian marke ...
Magetsi TECHNOLOGY & EQUIPMENT VIETNAM ETE 2019 International Exhibition
ne admin pane 19-10-29
ELECTRICAL TECHNOLOGY & EQUIPMENT VIETNAM ETE 2019 International Exhibition FAYUN Electric Co, Ltd. yakabatana neVi Viet Electronics TECHNOLOGY & EQUIPMENT Exhibition. Vietnam, ine huwandu hwevanopfuura mamirioni makumi masere nematanhatu, inzvimbo inesimba uye inokura nekukurumidza econo ...
ne admin pane 18-12-05
Shijiazhuang Fayun Electric Co., Ltd. yakabatana neMagetsi Networks eRussia2018 Exhibition muMoscow. Kuburikidza neratidziro, takataurirana nemakambani mazhinji emuno muRussia, uye kune musika mukuru wemagetsi Insulating Fiberglass Rod zvigadzirwa zvinotumirwa mu ...